Nhau - Jiangyin Puyang Heavy Viwanda CO., LTD
Kana iko chaiko kukanganiswa kwekuonekwa, kukanganisa kwekuona, kuwanda, kuongorora uye zvichingodaro zvikagadziriswa, muzviitiko zvakawanda zvinoshandisa chiyero chinoenderana, kujekesa mamiriro aya, uye edza kubatanidza nezvinoitwa nemushandisi.
Ultrasonic yekuonekwa kweakakura shaft forgings, iyo 2 ~ 3 diki yakaenzana gobvu zvakaremara mushe, kuwedzera kune icho chikamu chena poindi, yakawanda ari madiki kutsemuka, micro nharaunda yakasununguka, maburi, mapineti uye zvimwe zvinokanganisa.
Mazhinji emhosho anokanganisa pasi pezasi, uye saizi yesimba inosiyana nehunhu, saizi, chinzvimbo uye negwara rekukanganisa. Kugoverwa kwakakora kwemachena machena uye inclusions zvese zvine chekuita pazasi wave, asi kumadhigirii akasiyana. Iyo yekuratidzira kweye chena poindi yakakwira, uye kufambiswa kwekubatanidzwa kwakakwirira. Naizvozvo, kuderedzwa kwechena poindi kune yepasi wave kwakakura kupfuura iko kwekubatanidzwa. Pasi pekunzwisisa kumwechete, akawanda ezasi mafungu ewhite point anodzika nekukurumidza uye anoratidza mashoma nguva. Iyo yepazasi wave yekuisirwa inoderera zvishoma nezvishoma kwenguva zhinji. Nekuti iyo chena poindi kukanganisa kutsemuka, zvinodzora kunzwisisika kwekuonekwa. Hwakaremara wave unodonha zvishoma nezvishoma apo wave wepasi unodonha nekukurumidza.
Kutsemura yakawanda inclusions muhuvepo hwemhepo, mhepo ndiyo marongero ehukuru hweacoustic impedance ingangoita gumi yakaenzana, uye iyo acoustic impedance yesimbi yezvinhu mirairo yehukuru hweinenge 10⁶, musiyano unooneka muacoustic hunhu hwemhepo nesimbi zvinhu . Muganhu uripakati pekutyora uye hwaro zvinhu zvakapfava muganho.
Nekuongorora maitiro ekuparadzira emasaisai emuchadenga nepakati uye neacoustic hunhu hwehurema hwemukati hwekukanganwa kukuru, zvinogona kuoneka kuti muganhu hunhu hweshure dzakasiyana hunogona kuiswa muzvikamu zviviri.
(1) Sezvo inclusions (slag) nezvimwe zvinhu zviri kunyanya oxides yeSi, Al, Fe, nezvimwewo, zvinogona kunzi izvo zvisiri-zvesimbi inclusions mune simbi chimiro chegesi chiripo musimbi. Rudzi urwu rwezvinhu mune acoustic hunhu impedance ishoma pane acoustic hunhu impedance chizvaro, uye saka rudzi urwu rwekuremara uye muganho weiyo substrate zvinhu zvinogona kutorwa se "zvakapfava" muganho, kureva, kutsemuka, kuputika, shrinkage mhango, mweya bubble, kuiswa kwe goridhe uye kupedzisa muganho ndewe "nyoro" muganho, ultrasonic yakatwasuka munhu akapfurwa pane iyi mhando ye interface echo chikamu shanduko iri 180 °.
(2) Muganhu weiyo yakakwira-simbi simbi inosanganisirwa ndeyeiyo "yakaoma" muganho, uye chikamu cheyekuratidzira ripple kana iyo ultrasonic wave iri vertically chiitiko pane ino interface yakafanana neiya yemunhu radiation radiation. simbi inclusions ndeye tungsten, molybdenum uye zvichingodaro. Acoustic impedance yeiyo tungsten inenge (83.2 ~ 104.2) x 10 ⁵, molybdenum acoustic impedance iri 63.8 x 10 ⁵, uye general yekugadzira zvinhu acoustic impedance (39.4 ~ 45.6) x 10 ⁵ , saka iyi mhando yeakakwira dhivha simbi zvinhu acoustic impedance yakakura kupfuura yekumisikidza acoustic impedance ye substrate zvinhu, rudzi urwu rwehurema uye muganho weiyo substrate zvinhu zvinogona kutariswa se "zvakaoma" muganho. Zvekutsemuka, machena mavara, maburi ekudzikira, matubvu uye asiri esimbi inclusions, iwo maratidziro uye kutapuririsa zvinogona kuverengerwa kunyangwe zvavo dzakasiyana acoustic impedance, iyo inoratidza iyo amplitude attenuation nhanho yeiyo ultrasonic echo chiratidzo. Musiyano weacoustic impedance pakati peasina-metallic inclusions uye matrix maturusi idiki, uye iyo transmittance yakakwira. Naizvozvo, kuderedzwa kwemaungira kweasina-esimbi inclusions kwakakomba kwazvo, izvo zvinoratidza kuti yepasi wave wave amplitude idiki kana kunyangwe hapana pasi pezasi panguva yekuonekwa. Chena chena inoratidzira wave yakasimba kwazvo, asi nekuti inoonekwa mumapoka, iyo waveform yakajeka uye yakasunganidzwa mukutsvaga. Iyo yekuratidzira wave yekuparara kuremara yakasimba uye isina, yakajeka kwazvo. Nekuda kwenhamba yakakura ye inclusions dzakatenderedza shrinkage cavity mhosho uye kuomarara kwepamusoro, iyo inoratidzirwa wave ichave neakakura kuderedzwa.